Swedan: Telefoon Loogu Tala Galay In Wax Lagag Qabto Xagjirnimda Oo Cidiba Soo Wici Wayday – Heemaal News Network
Waxaa aad u yar dadka soo waca telefoon loogu tala galay in wax lagaga qabto xag-jirnimada.
Telefoonkan oo cambaarayn ba’an bilowgiiba kala kulmay dadwaynaha ayuu haatan tirakoobku tilmaamayaa in 11 jeer uun lasoo wacay bishii Febraayo oo dhan.
Xigash Radio Swedan
Fathi Abdullahi: Gabadhu Inta Ninku Shaqo Qabto Ayay Qaban Kartaa,Iyo Waliba Dhariga Oo Ay Kariso
laa yaraanteeydii waxaan ku fekeri jiray inaan ka mid noqdo ciidanka ammaanka ama boliiska loo yaqaanno. Hase yeeshee waa mid u baahan inuu qofku haysto dhalashada dalka, si uu ku barto tacliinta ciidanka ammaanka. Waxaan […]
Swedan Oo Ictiraafaysa Somaliland Bisha Danbe Hadii Doorashada Uu Ku Guulaysto Xisbiga Sveigedemokraterna
Xisbiga la yidhaahdo Sveigedemokraterna, ahna xisbi xag jir midigta fog ah, ayaa soo bandhigay siyaasadiisa ololaha doorashada. Xisbigan oo ahaa xisbi aad u yar sannado ka hor dadka ku nool Swedan-na ayna maqal ama aqoon […]
Doorashada Swedan: Ida Gure: “Doorashada Sannadkan Way I Cabsi Gelisay”
Xigasho Radi Swedan © Heemaal News Netwok